By soniya on	 14th August 2019 Highlights, नेपाली, समाचार
सडक, सदन, अदालत हुँदै समलिंगी मुद्दाले फिल्ममा प्रवेश पाएको छ । सुवर्ण थापा निर्देशित ‘सुनगाभा’ निर्माण भएपछि पहिलोपटक नेपालमा भिन्न जनरमा काम सुरु भयो । फिल्म ‘को–आफ्नो’मार्फत ऋचा शर्माले समलिंगी प्रेम र आदर्शलाई चित्रण प्रयत्न गरिन् ।
आगामी महिना रिलिज तयारीमा रहेको साम्राज्ञी शाह अभिनित ‘मारुनी’ पनि समलिंगी प्रेममै आधारित छ । पोस्टरदेखि ट्रेलरसम्म फिल्मको मुख्य कथावस्तुलाई चित्रण गर्छन् । साम्राज्ञी स्वयम यौनांग प्रत्यारोपण गरेपछिको समलिंगी पात्रको भूमिकामा छिन् ।
नेपालमा समलिंगी कन्टेन्टमा निर्माण भएका फिल्मले बक्सअफिसमा उछाल ल्याउन सकेका छैनन् । मारुनीले सक्ला ? सक्नको लागि यसको वर्ड अफ माउथ बलियो हुनुपर्छ । नवल नेपाल निर्देशित फिल्ममा समलिंगी प्रेमलाई फेमिली ड्रामासँग गाँसिएको छ ।
समलिंगी फिल्म भनिएपनि मेनस्ट्रिम मसला हालेर इमोसनलाई कमजोर तुल्याएको आरोप अघिल्ला यस्ता फिल्मले खेपेका थिए । के ‘मारुनी’ले समलिंगी इस्युलाई न्याय गर्ला ? के मारुनीले यसतर्फ प्रयत्न गरेको छ ? या यो एउटा मनोरञ्जन मात्र हो ? हेरेपछि नै थाहा लाग्ला ।